४० डिग्री चेन्नाई – Pramb's Weblog
जुन 8, 2011 by PRAMB
४० डिग्री चेन्नाई
यो लेख २१ जेठमा नागरिक घुमफिरमा प्रकाशित भएको हो
काठमाडौंमा तीस डिग्री गर्मी बढ्दा चैत अन्तिम साता चेन्नईको ४० डिग्री गर्मी याद आउँछ । दार्जिलिङ सिक्किम यसअघि गए पनि नेपाली भाषीको बसोवास रहेकाले भारतीयपन महसुस गर्न पाइएको थिएन । त्यो अवसर यसपटक मिल्यो ।
पत्रकारिता अध्ययन सुरु गर्दैदेखिको चेन्नई जाने हुटहुटी । निवेदन दिएको पहिलोचोटि नै आफू छानिएको थाहा पाएदेखि म चेन्नई जाने दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा थिएँ । तर साथीहरुबाट सुनेँ औधी गर्मीले मानिस यो सिजनमा चेन्नई जानै मान्दैनन् । गर्मीको बहानामा पहिलोपटक मिलेको अवसर गुमाउन चाहिनँ ।
एसियन कलेज अफ जर्नलिजममा १५ दिने तालिममा भाग लिन जाने हामी तीन नेपाली थियौं । कसैले कसैलाई नचिनेका । तर सामाजिक साजालले कति सहज बनाइदिएको छ भने फेसबुकबाट उनीहरुको फोटो हेरे एयरपोर्टमा देख्दा अनुहार छुट्याउन गाह्रो पर्दैन । मैले फेसबुकबाट द काठमान्डु पोस्टका सन्तोष क्षेत्री र समाचारपत्रकी सन्ध्या राईलाई सर्च गरेँ र उनीहरु’bout पाएजति जानकारी लिएँ । सायद उनीहरुले पनि त्यही गरेका थिए कि !
चेन्नई पुग्नु अघिल्लो बिहानसम्म हरेक दिन आझ्नो काखे कम्प्युटरमा चेन्नईको म्यापमा घुम्नुपर्ने ठाउँको फेहरिस्त बनाउँथेँ । तापक्रम देखेर उखरमाउलो गर्मीले चिमि्रएका आँखाले हेर्नुपर्ने नयाँ नयाँ ठाउँको कल्पना गर्थें । घुमाइ मध्यविश्वको दोस्रो ठूलो मरिना बिच मुख्य आकर्षण थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको विमानले मुम्बईमा ओराल्दैमा गर्मीले हामीलाई अत्याइसकेको थियो । मुम्बईबाट साँझ चेन्नई पुग्नासाथ हामीलाई पहिले स्वागत गर् यो त्यहाँको गाला डढ्लाजस्तो हप्प तातो गर्मीले । होटलवाला हामीलाई लिन एयरपोर्टमै आएका रहेछन् । उनीबाटै थाहा भयो हामी बस्ने होटल त पाँचतारे रहेछ । त्यो थाहा पाउँदा हामी झन् उत्साही भयौं ।
अबका पन्ध्र दिन यही गर्मीमा अभ्यस्त हुनुको विकल्प थिएन । त्यहाँका फराकिला फ्लाइओभर भएका सडक हामीलाई मात खुवाउने थिए । दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका हामीलाई त्यहाँ दिपावली मनाइरहेजस्ता सडकबत्ति पनि लोभलाग्दो लाग्यो ।
पुगेको भोलिपल्टैदेखि दैनिक ९ देखि ५ बजेसम्मको व्यस्त दैनिकी । सुरुका दिन ’round बजार हेर्न र चेन्नई बुझ्नै लाग्यो ।
तामिलनाडु राज्यको राजधानी रहेछ चेन्नई । भारतको चौथो ठूलो सहर । विकसित सहर देखेर हामीमात्र नभई सार्क देशका अरु विद्यार्थी पनि छक्क परेछन् । नेपाली फिल्मभन्दा बढी चासो हिन्दी फिल्मलाई दिने हामीलाई हिन्दी आउँथ्यो तर चेन्नईमै बस्नेलाई भने हिन्दी आउँदो रहेनछ । कि अंग्रेजी कि तामिल । उनीहरुको चासोभन्दा बाहिरको भाषा रहेछ हिन्दी ।
हामी घुम्ने योजनासाथ तेस्रो दिन पहिलोपटक कलेज नजिकैको बेसान्त बिच पुग्यौं । पहिलोपटक समुद्री छालसँग खेल्न पाउने उत्साह काठमाडौंदेखिकै थियो । मैले क्यामरा ब्याट्री अघिल्लै दिन फुल चार्ज गरेकी थिएँ ।
तर दुर्भाग्य । जागिरे जीवनको पहिलो कमाइले किनेको पहिलो क्यामरा पहिलोपटक देखेको छालले बगाएर लग्यो । अझै पत्यार लाग्दैन त्यो महासागरको छाल आँधीझैं कसरी आयो ! निमेषभरमै क्यामरा हरायो । कुनै कुरा आफूबाट गुम्न लागे त्यसलाई जोगाउने तागत आफूसँग नहुँदोरहेछ भन्ने दिव्यज्ञान क्यामरा समुद्री छालसँग मिसिएसँगै भयो मलाई । तर त्यही कारण बाकीँ बसाइ बिगार्नु थिएन ।
त्यसपछि मेरो हातमा क्यामरा भएन तर अरु साथीको क्यामरामा धेरैपटक कैद भएँ ।
हामी त्यहाँ नजिकै रहेको मुरुगान इडलीमा गयौं । जुन साउथ इन्डियन फुडका लागि असाध्यै चर्चित रहेछ । केराको पातमा पन्ध्रभन्दा बढी परिकार खान पाइने साकाहारी होटलमा बेलुकी खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुने गरी मानिसको भीड लाग्दोरहेछ ।
कलेजको तालिकाअनुसार आफूले योजनामा राखेका घुम्ने ठाउँ त जानै मुस्किल । तैपनि शनिबार र आइतबार कलेजले नै हामीलाई नजिकका घुम्नैपर्ने ठाउँ घुमाउने योजना बनाएको रहेछ ।
योजनाअनुसार महावलिपुरम घुम्ने दिन थियो शनिबार । जुन चेन्नई सिटीबाट ६० किलोमिटर दक्षिण कान्चीपुरममा पर्छ । सातौं शताब्दीमा बनेका महावलिपुरमका मठमन्दिर युनेस्कोको विश्व सम्पदाअन्तर्गत पर्छ ।
ठुल्ठुला ढुंगा कुँदेर बनाइएका महिसासुरामारथिनि गुफा भराहा गुफा मन्दिर हात्ती िसंगो ढुंगामा बुट्टा भरेर बनाइएका पाँच पाण्डव र द्रौपदीको रथ देख्दा अचम्म लाग्छ । ठाउँठाउँमा ठुल्ठुला ढुंगा छन् । एउटा ढुंगामा अर्को ढुंगा छ जुन झरिहाल्छ जस्तो देखिन्छ तर कसैको हल्लाउने तागतसम्म पुग्दैन ।
महावलिपुरममै सिसोर मन्दिर पनि छ जुन हेर्नैपर्ने अर्को ठाउँमा पर्दोरहेछ । यो बे अफ बेङ्गालको किनारमा पर्छ । हामी त्यहाँ जाँदा मन्दिर पुनःनिर्माण गरिँदै थियो । तातो घाममा नरिवल पानी खाँदै बे अफ बेङ्गालको छालसँग खेल्दै ’round डुल्नुको मजै बेग्लै ।
महाबलिपुरमको चिनो आफन्तलाई ल्याउने हो भने सस्तो मूल्यमा बुनेका सामान र कपडा त्यहाँ पाइन्छन् ।
आइतबार । चेन्नई सिटी ’round घुम्न जाने दिन । ठाउँ’bout राम्रो जानकारी होस् भनेर गाइडको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । तर सबै आआफ्नै सुरमा । गाइड बसबाट देखिने ससाना नदीको पनि चर्चा गर्थे । उनलाई सुन्ने कान बिरलै चनाखा थिए । हामी ठाउँ’bout थाहा पाउन भन्दा अचम्मका भवन सडक र बिच हेरेरै टोलाइरहेका हुन्थ्यौं ।
बस सेन्ट थोमस माउन्ट चर्च तल रोकिएको पत्तोसम्म कसैलाई भएन । बसबाट ओर्लनासाथ फेरि चर्को घामको चुनौती । तर ’roundको वातावरण एकदमै आनन्दमय । लाग्यो चेन्नई घुम्न रुचाउनेले एकपटक पुग्नैपर्ने सहर रहेछ ।
एउटा सानो पहाडमा बनेकाले यसलाई माउन्ट चर्च भनिएको रहेछ । मुख्य प्रवेशद्वारबाट जाँदा १३२ खुड्किला उक्लनुपर्ने । अरु ठाउँमा जस्तै आइतबारको भीड यहाँ पनि थियो ।
डाँडाको चर्चबाट ’roundको भ्यु राम्रो देखिन्थ्यो । त्यसैले त्यस्तो तातो घाममा भ्युलाई ब्याकग्राउन्ड बनाएर फोटो खिच्यौं हामीले । चर्चभित्र प्रार्थना गर् यौं ।
अर्को गन्तव्य बन्यो कपालेश्वर मन्दिर । मन्दिर वरिपरि जताततै भगवानको आकृति कुँदिएका ढुंगा थिए । सातौं शताब्दीमा बनेको यो शिव मन्दिरमा सुनले िसंगारिएका मूर्ति हेर्दै अचम्म लाग्ने । आरतीको समयमा मन्दिर’roundको बत्तिको रमझमले निस्कनै मन लागेन ।
जुत्ता परैबाट फुकाल्नुपर्ने मन्दिरको भुइँमा बिछ्याइएको तातो पैताला सेक्ने ढुंगामा उभिरहन पनि नसकिने ।
आधा दिनजसो घाममा हिँड्नेबित्तिकै जिउ गलिसकेको हुन्थ्यो ।
फर्किंदा देखियो हामीले थुप्रैपटक सामान किनेको बेलुकीको खाना खाएको र साँझको समय बेफिक्री बरालिएको टि नगर ।
टि नगरको पोन्डी बजार सामान किन्नका लागि असाध्यै चर्चित छ । सडक किनार र ठुल्ठुला सपिङ मल भएको यो ठाउँमा छान्न जाने सस्ता र राम्रा सामान पाइन्छन् । काठमाडौंको असनजस्तै लाग्छ । मान्छेको भीडभाड सामानको रोजाइ सबै उस्तै । आफन्त साथीका लागि केही किन्न सस्तो र धेरै रोजाइका सामान हुने बजार रहेछ यो ।
भ्रमणको अन्तिम दिन हामी चेन्नईको पुरानो रेल चढेर मरिना बिच घुम्न गयौं । नेपालीलाई बिचको घुमाइ एउटा सानकै विषय हो । छालसँग जिस्किन पाउने मेरो पहिलो अनुभव क्यामेराले गुमाए पनि पछि नयाँ क्यामरासहित म साँझको भीडमा मरिना बिचमा थिएँ । अस्ताउँदो सूर्यसँगै बिस्तारै आनन्दको हावा लाग्दो रहेछ मरिना बिचमा । कुनै मेला लागेजस्तो छ यहाँ मानिसको भीड ।
नअघाउन्जेल छालसँग खेल्दै फोटो खिच्यौं । होटल पुग्न अबेला भइसकेकाले हामी शितलतामा बस्न नअघाएको मन लिएर फक्र्यौं । छालको दुरी हामीबाट बढ्दै गयो । सार्क देशबाट आएका साथसँगको दुरी घट्दै । झन्डै दुईहप्ता बसेर थुप्रै रमाइलो गरेका थियौं ।
तर चेन्नई पुगिसकेपछि पोण्डीचरीस्थित अरबिन्दो आश्रममा जाने धोको भने पुरा हुनसकेन । पोण्डीचेरीमा थुप्रै पर्यटक त्यहाँको बोटानिकल गार्डेन र अरबिन्दो आश्रममा गुरुजीलाई भेट्न जान्छन् । गुरुजी भेट्ने मेरो इच्छा समय अभावले अधुरै रह्यो । अर्को पालि त्यता आउँदा भेटुँला है गुरुजी ?
← जेठ १४, २०६८
गुरु देवायः नमो नमः ! →
One thought on “४० डिग्री चेन्नाई”
Raj | जुलाई 10, 2011 मा 5:10 बिहान
2068-3-25 gate aako lekh pani rakhada ramro hunthiyo !